हाम्रा नेताका छोराछोरी कस्ता छन् ? ओबामाकी कान्छी छोरी भने रेष्टुरेन्टमा खाना बेच्दै ! – Dainik Sangalo
हाम्रा नेताका छोराछोरी कस्ता छन् ? ओबामाकी कान्छी छोरी भने रेष्टुरेन्टमा खाना बेच्दै !
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २७, २०७८ समय: १७:४०:४४
बीबीसी – नेपालमा राजनीतिक दलका नेता र उनीहरुका छोराछोरी भन्ने वित्तिकै गु’ण्डगर्दी, कमिसन लगायतका काममा व्यस्त रहेका खवरहरु सार्वजिक भइरहन्छन्।
उता, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाकी छोरी साशा ओबामाले भने ह्वाइट हाउसको सुविधा छाडेर सिफुड रेस्टुरेन्टमा काम गर्न थालेकी छन् । अमेरिकी मिडियाका अनुसार १५ वर्षीयाले ओबामाले मार्थाको दाखबारी, म्यासाचुसेट्समा रहेको सि फुड रेस्टुरेन्टमा खाना पकाउने काम गर्न थालेकी हुन्।
‘साशा’ उनको पूरा नाम हो । तर उनले ‘नताशा’ नामबाट आफूलाई परिचित गराइरहेको रेस्टुरेन्टमा रहेका छ जना गोप्य सेवा दिइरहेका एजेन्टहरुलाई उदृत गर्दै बोस्टन हेराल्डले जनाएको छ।
यो शहर ओबामाहरुको लागी गर्मी बिदा मनाउनको लागि एक मनपर्ने स्थान भएको छ। काम गर्ने समयमा ओबामाकी कान्छी छोरीले रेस्टुरेन्टको नीलो टी शर्ट र टोपी लगाएकी हुन्छिन् । एक सहकर्मीले दिएको जानकारीअनुसार उनी टेकआउटमा तलवमा काम गरीरहेकी थिइन्।
उनका अनुसार शासालाई छ जना मानिसले सहयोग गरिरहेका थिए । ह्वाइट हाउसले उक्त प्रतिवेदनमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन् तर प्रथम महिला मिशेल ओबामाले आफ्ना दुई छोरीहरुलाई सकेसम्म सामान्य अवस्थामा ल्याउने प्रयासको बारेमा भनेकी छन्। सुरक्षा टोली नजिकै कारमा पर्खिरहेका हुन्छन्।
Last Updated on: August 11th, 2021 at 5:40 pm